Ihe mkpuchi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ihe mkpuchi
Ike nka nke ngwa traktọ MTZ-1523, uru na odighi uru nke ihe nlereanya
Ndị ndị dị otú ahụ adịghị elekọta ndị na-anyapụta traktị dị ka, sịnụ, ụdị ọhụrụ nke ndị njem ụgbọ elu ma ọ bụ ndị traktị bụ isi. Ma na-enweghị ha, ọ gaghị ekwe omume iche n'echiche ọrụ ubi na obodo. Igwe ndị dị otú ahụ na-agbasawanye mgbe niile, ma usoro MTZ mmepụta abụghị ihe ọzọ. Tụlee otu n'ime traktị kasị ewu ewu nke osisi a, bụ MTZ-1253.
Ntinye nke griin na-ebu osisi na mba, aro na usoro
Tupu i jiri aka gị mee ụlọ griinụ, ị ga-ekpebi maka ọrụ ndị ị chọrọ. Ị ga na-eto eto na obere akụkụ, ị chọrọ ịkwaga na ya ka ị na-eto, ma ọ bụ ị ga-ebuli ihe nkiri na-ekiri ihe nkiri, si otú ahụ na-agbanwe okpomọkụ na griin ha. Ikekwe ị na-eche naanị otu esi eme ụlọ griin.
Agrofibre ụdị na iji ha
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi, bụ ndị na-eji soda, peat ma ọ bụ elu na-eme ihe ngwa ngwa, mesịrị mee ka agrofibre. Nke a na-eji ihe onwunwe eji ọ bụghị nanị site na nnukwu ụlọ ọrụ agrarian, kamakwa site na obere ugbo. Taa, anyị ga-amụ banyere ihe na-agwụ ike, kwurịta ya, ma nyochaa ihe mgbagwoju anya nke ọrụ.
Esi eji ihe eji eme ihe "Agrotex"
Ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ ugbo na-amụrụ ihe nwere otu ọrụ - ịgha mkpụrụ na-echebe ya site na ọnọdụ ihu igwe, ọrịa na pests. Taa, ọ dị mfe karị ime nke a karịa oge gara aga, ma ọ bụrụ na ị na-eji ezi àgwà kpuchie ihe - Agrotex. Nkọwapụta na ihe onwunwe Njirimara "Agrotex" bụ ihe a na-etinyeghị na ya, ume na ọkụ, arụpụtara dị ka nkà na ụzụ spunbond.
Kedu ihe bụ lutrasil?
Ugboro ugboro, mgbe ị na-akụ mkpụrụ, ọ dị mkpa ịnye ụlọ griinụ maka kụrụ iche. Iji chekwaa seedlings site na ifufe, oyi na ihe ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ, jiri ihe pụrụ iche maka ụlọ. N'isiokwu anyị, anyị ga-akọwa lutrasil, gwa gị ihe ọ bụ na otu esi eji ya.
Iwu maka nlekọta oge maka Kampsis
Kedu otu esi enweta nnukwu ihe ubi nke kabeeji Nozomi? Atụmatụ iche na ndụmọdụ gardeners
Ụlọ griin kporo - ọgbọ ọhụrụ nke anaghị eri anụ
Ọ nwere ike ibute basil na tomato dị nso n'otu ụlọ griin ma ọ bụ n'ọhịa? Kedu ka esi eme ya?
Nuances nke na-eto eto kọlịflawa maka seedlings, n'ọhịa na na griin haus
Anyị na-etolite n'onwe anyị osisi vaịn
"Na-achọsi ike": ihe ngosi maka iji na ọgwụcological properties of drug
Kukumba epupụta atụgharị edo edo na akọrọ: akpata na ụzọ nke ịlụ ọgụ